I-Penguin 2.0 Uhlala Kanjani Ohlangothini Oluhle lweGoogle | Martech Zone
I-Penguin 2.0 Uhlala Kanjani Ohlangothini Oluhle lweGoogle
NgoLwesithathu, Juni 19, 2013 NgoLwesithathu, Juni 19, 2013 UKelsey Cox
Sekungaphansi kwenyanga selokhu kwethulwe isibuyekezo sakamuva sosesho lwe-Google, futhi yize ubuchwepheshe obulwa nogaxekile be-Penguin 2.0 bungakaqalwa ngokugcwele okwamanje, sekuvele kudala ukukhathazeka.
Abathengisi bokuqukethwe abadingi ukuphelelwa yithemba inqobo nje uma behlela ukuhlala ohlangothini oluphephile lweGoogle. Ngokuya ngemininingwane ehlanganiswe ku Marketoinfographic yakamuva kakhulu, I-Google Ithenge i-Zoo, lokho kusho ukweqa amasu e-SEO angaphansi komgunyathi njengokugaxekile kwesixhumanisi, ukuqondisa kabusha okunyonyobayo noma ukuvala, nokunamathela kuphela kunani eliphezulu, amaqhinga wesigqoko esimhlophe.
Ngokuqondile, amawebhusayithi agxile ekukhiqizeni okuqukethwe okufanele nokuhlukile, ngenkathi kuqinisekiswa ukusebenza kahle kwewebhusayithi, ama-backlink athembekile nezimpawu zomphakathi ezinamandla mancane amathuba okuthi ezwe ukushisa kwePenguin 2.0. Okuqukethwe okubuyekezwa ngokungaguquguquki, isikhathi esisheshayo sokulayisha ikhasi lewebhu kanye nezixhumanisi ezinokwethenjelwa ezivela kumawebhusayithi adumile nazo ziyizindlela zokuqinisekisa umthelela omncane.
Nakhu ukubuka okuphelele kwalokho i-Google ekugcinile:
Tags: Ukukhangisa OkuqukethweGoogle +marketingpenguin 2.0